အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
Posted by kai on Sep 5, 2017 in Contributor, Columnist, Cover Faces, Myanmar Gazette | 15 comments
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇
➩ U.S. ပြည်နယ်များမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာချစ်ဦးညို၊ ဂျုး၊ ထင်လင်းဦးတို့ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ။
➩ ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေအတွက် ရခိုင်တေးရေးနဲ့တေးသံရှင်ဦးသန်းမောင်၊ မိုင်၊ ရတနာမိုင်၊ စိန်လင်း(Aroma) တို့ရဲ့ U.S. ပြည်နယ်အသီးသီးလှည်လည်ဖျော်ဖြေပွဲများ။
➩ မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ချစ်ဦးညီနဲ့တင်မိုး။
➩ ၀င့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်နှင့် မူပွားခွင့်။
➩ မော်ဒယ်လ်မိခင်တင်မိုးလွင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း။
➩ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထိုက်ရဲ့ Allergy တခုခုနဲ့မတည့်ခြင်း။
➩ စက်တင်ဘာအလှပန်း Thinn Eai Thu Tun
➩ လစဉ်ဖော်ပြနေကျအင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဓာတ်ပုံဆောင်းပါး၊ ဗေဒင်ကဏ္ဍများ၊ ဓာတ်ပုံဝေေ၀ဆာဆာ၊ သုတ၊ ရသ စုံလင်စွာဖြင့် စက်တင်ဘာလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်ေနပါပြီ။ အမြို့မြို့အနယ်နယ် မြန်မာဆိုင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ။
Kai has written 922 post in this Website..
U.S. ပြည်နယ်များမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာချစ်ဦးညို၊ ဂျုး၊ ထင်လင်းဦးတို့ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ ဆိုတာလေး
နားထောင်ချင်လိုက်တာ။ youtube မှာ ရနေပြီလား မသိ။ ပြေးကြည့်အုန်းမှ
… အမေရိကားပြည်ထဲ ကလေးဘ၀ကထဲကခိုးဝင်နေထိုင်ကြတဲ့.. ကလေးတွေကို.. ဗီဇာပေးထားတဲ့စနစ်.. DACA ကို ထရမ့်ဖျက်သိမ်းတဲ့အပေါ်… မကျေနပ်တဲ့.. အမေရိကပြည်နယ် ၁၅ခုနဲ့.. မြို့တော်ဒီစီက.. ထရမ့်ကို.. ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲလိုက်ကြောင်း..။
15 States, D.C. Sue to Stop Trump DACA Decision
Sep62017, 9:05 pm ET
NEW YORK — Fifteen states and the District of Columbia sued the U.S. government Wednesday to block President Donald Trump’s plan to end protection against deportation for young immigrants, saying it was motivated by prejudice against Mexicans.
Legal experts, however, say the evidence of bias is not strong in the case involving the Deferred Action for Childhood Arrivals program, or DACA.
“It might be able to muck up the works, maybe push off the effective date of the repeal, but I don’t see litigation being successful in the same way as the travel ban,” Kari Hong, an immigration expert at Boston College Law School, said, referring to the lawsuit earlier this year that limited the Trump ban involving predominantly Muslim nations.
As Aung San Suu Kyi’s biographer, I have to say that the only good thing she can do now is resign
Suu Kyi’s mistake was submitting to the undemocratic constitution she despised. Today she finds herself the most powerful civilian in government, but with no right to stand up to, let alone overrule it
Peter Popham @peterpopham3days ago131 comments
Groundswell of support for ‘Thai Canal’ 18 Sep 2017 at 07:30 7,000
A long-forgotten canal project has moved one step closer to being resurrected afteragroup of influential figures and businessmen with Chinese ties backed an economic feasibility study for the scheme.
Many of them gathered at the recently hosted “International Conference on the Thai Canal” in Bangkok to air their support for the Kra Canal project, now known as “Thai Canal”.
Please credit and share this article with others using this link:http://www.bangkokpost.com/news/general/1326415/groundswell-of-support-for-thai-canal. View our policies at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.gl/ou6Ip. © Post Publishing PCL. All rights reserved.
မြောက်ကိုရီးယား၊ ရိ်ုဟင်ဂျာနဲ့.. မာရီယာ
North Korea, Rohingya, Hurricane Maria: Your Tuesday Briefing
By CHARLES McDERMIDSEPT. 18, 2017
In brief remarks on Monday, Mr. Trump said the U.N. had grown ineffective and should overhaul itself, but gave no clue as to whether he would cut funding.
• Daw Aung San Suu Kyi will address Myanmar today for the first time about violence that has sent more than 400,000 members of the Rohingya Muslim minority fleeing into Bangladesh. Above,aprotest in Indonesia.
Her televised speech comes on the heels ofadiscussion of the Rohingyas’ plight among foreign ministers on the sidelines of the General Assembly, led by Britain’s Boris Johnson. Analysts said sanctions were unlikely.
Our Interpreter column finds that Myanmar is followingaglobal pattern of ethnic cleansing.
VOA BBC တို့လက်ထဲဝယ်.. America အမေရိက ကနေ.. American အမေရိကန် မဖြစ်စေလို..။
“As president of the United States, I will always put America first, just like you, as the leaders of your countries, will always, and should always, put your countries first,” Trump
Speech by State Counsellor on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace (19-9-2017)
Myanmar State Counsellor Office added4new photos.
Speech delivered by Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar on Government’s efforts with regard to National Reconciliation and Peace
Nay Pyi Taw, 19 September 2017
Last year, when I addressed the United Nations’ General Assembly as the representative of the newly established government of Myanmar, I reaffirmed our faith and confidence in the purpose and principles of the Charter of the United Nations. It is in this enduring belief in the capacity of nations to unite to buildamore peaceful and prosperous world,akinder and more compassionate home for all mankind, that we wish to share with members of the international community, the challenges that our country is now facing and the steps that we are taking to overcome them. This year, as I shall not be able to travel to New York for the United Nations’ General Assembly, I have arranged this diplomatic briefing.
When our people voted for the National League for Democracy in the elections of 2015, they in fact entrusted to us, the task of carrying out three responsibilities: democratic transition, peace and stability, and development. None of these challenges are either easy or simple. Transition for us isatransition to democracy after halfacentury or more of authoritarian rule, and now we are in the process of nurturing our nascent and yet imperfect democracy.
Peace and stability was something that we had to achieve after nearly seventy years of internal conflict that started on the day of our independence back in 1948. And development has to be achieved within the context of the first two – nurturing democratic values, establishing peace and stability, and achieving the kind of sustainable development that would be seen as equitable by all our peoples.
Burma isacomplex nation as all of you know, and its complexities are compounded by the fact that people expect us to overcome all of these challenges in as shortatime as possible.
I think it is only fitting that I should remind you today that our government has not yet been in power for even eighteen months. It will be eighteen months at the end of this month. Eighteen months isavery short time in which to expect us to meet and overcome all of the challenges that we have been expected to do.
This does not mean that we are not ready to go on with our task of overcoming these challenges. Because I believe in the community of nations, I am prepared to share with all our friends who wish us well and who understand our problems and sympathies with us, what we have been doing to achieve democratic transition, peace and stability, and development.
I am aware of the fact that the world’s attention is focused on the situation in Rakhine State. As I said at the General Assembly last year, asaresponsible member of the community of nations, Myanmar does not fear international scrutiny and we are committed toasustainable solution that would lead to peace, stability and development for all communities within that State. I then went on last year to giveabrief outline of our plans to achieve this end.
Unhappily, on9October 2016, eighteen days after the delivery of my address at the General Assembly, three police outposts were attacked by armed Muslim groups. There were further attacks on 11 October and 12 November and these clashes resulted in loss of lives, injuries, burning of villages and the displacement of peoples in the affected areas. Many Muslims fled to Bangladesh.
Since then, the government has been making every effort to restore peace and stability and to promote harmony between the Muslim and Rakhine communities. Even before these outbreaks took place, we had establishedaCentral Committee for rule of law and development in the Rakhine and invited Dr. Kofi Annan to leadaCommission that would help us to resolve the longstanding problems of that State. But, in spite of all these efforts, we were not able to prevent the conflicts from taking place. Still, throughout the last year, we have continued with our programme of development and the establishment of peace and harmony.
After several months of seemingly quiet and peace, on 25 August, thirty police outposts, as well as the Regimental Headquarters in Taungbazar village, were attacked by armed groups. Consequent to these attacks, the government declared the Arakan Rohingya Salvation Army and its supporters responsible for acts of terrorism, asaterrorist group in accordance with the Counter-Terrorism Law, section 6, subsection 5.
There has been much concern around the world with regard to the situation in Rakhine. It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability and rule of law, throughout the State.The security forces have been instructed to adhere strictly to the Code of Conduct in carrying out security operations, to exercise all due restraint, and to take full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians.Human rights violations and all other acts that impair stability and harmony and undermine the rule of law will be addressed in accordance with strict norms of justice.
Humanitarian assistance was provided to displaced communities byateam led by the Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement from 27 August 2017 onwards. Details of humanitarian assistance programmes will be made available to all of our guests in due course.
The final report of the Advisory Commission on Rakhine State chaired by Dr Kofi Annan, was made public on 24 August, in fact, the very day on which the last round of attacks took place. We are determined to implement the recommendations of the Commission. Those recommendations that will bring speedy improvement to the situation withinashort time frame will be given priority. Other recommendations we will have to take time over, but every single recommendation that will benefit peace, harmony and development in the Rakhine State will be implemented within the shortest time possible.
The government is working to restore the situation to normalcy. Since5September, there have been no armed clashes and there have been no clearance operations. Nevertheless, we are concerned to hear that numbers of Muslims are fleeing across the border to Bangladesh. We want to find out why this exodus is happening. We would like to talk to those who have fled as well as those who have stayed. I think it is very little known that the great majority of Muslims in the Rakhine State have not joined the exodus. More than 50 per cent of the villages of Muslims are intact. They are as they were before the attacks took place. We would like to know why.
This is what I think we have to work towards. Not just looking at the problems, but also looking at the areas where there are no problems. Why have we been able to avoid these problems in certain areas? For this reason, we would like to invite the members of our diplomatic community to join us in our endeavour to learn more from the Muslims who have integrated successfully into the Rakhine State. If you are interested in joining us in our endeavours, please let us know. We can arrange for you to visit these areas, and to ask them for yourself, why they have not fled, why they have chosen to remain in their villages, even atatime when everything around them seems to be inastate of turmoil.Apart from what we are doing in the matter of allaying the fears of our people, I would like to say that we have been continuing with our socio-economic development programmes in Rakhine.
Let me outlineafew of them.The Rakhine State Socio-Economic Development Plan 2017 – 2021 has been drafted to boost regional development in various sectors. Hundreds of new jobs and opportunities have been created for local people through Public Private Partnerships. The viability ofanew Special Economic Zone to bring new jobs and businesses is being assessed. In terms of infrastructure development, electrification has been expanded with new roads and bridges built, includinganew highway connecting remote areas previously only accessible by boat.All people living in the Rakhine State have access to education and healthcare services without discrimination. Healthcare services are being provided throughout the State including hard to reach areas, with new mobile clinics. The government has upgraded 300 schools in Rakhine. The vocational and technical training programmes have begun. Muslim students also have access to higher education without any discrimination.
Humanitarian aid reached all communities in 95% of the affected areas before the recent attacks on August 25. We are now starting another round of humanitarian aid endeavour which we hope will take care of all the peoples in the region.
With regard to IDP’s, three camps have been closed and the necessary assistance provided, including the building of new houses. There is more to do in this area. We are aware of the challenges and we are facing them.
With regard to citizenship,astrategy with specific timelines has been developed to move forward the National Verification Process. But this isaprocess which needs cooperation from all communities. In some Muslim communities, their leaders have decided that they are not to join in the verification process. We would appreciate it if all friends could persuade them to join in the process because they have nothing to lose by it.We are also trying to promote inter-communal religious harmony by engaging inter-faith groups. A new curriculum is to be introduced in schools withafocus on moral civic ideas and peace and stability.
A new FM radio channel has been set up to provide information on, amongst others, healthcare, national verification process, and education to all communities. It broadcasts in Rakhine, Bengali and Myanmar languages.
Training and capacity building for police and security forces is being provided in cooperation with the EU and United Nations agencies.
Since December 2016, local and foreign media groups have been given access to areas previously off-limits in Rakhine. Even after the outbreaks on 25 August, we arranged for several media groups to visit the afflicted areas.
The government is working hard to enhance existing relations with Bangladesh. The Minister of State for Foreign Affairs and the National Security Advisor visited Bangladesh in January and July of this year. We were also hoping foravisit from the Home Minister of Bangladesh but it had to be postponed, for reasons, I think of other commitments on the part of the Minister. We will welcome him at any time that he is able to come and we hope to take forward the arrangements with regard to the security of the border which we are trying to implement together.
There has beenacall for the repatriation of refugees who have fled from Myanmar to Bangladesh. We are prepared to start the verification process at any time. A verification process was set up as early as 1993 and based on the principles to which both countries agreed at this time, we can continue with the verification of those refugees who wish to return to Myanmar. We will abide by the criteria that was agreed on at that time. As our National Security Advisor has assured Bangladesh, and which I can confirm now, we are ready to start the verification process at any time. Those who have been verified as refugees from this country will be accepted without any problems and with full assurance of their security and their access to humanitarian aid.
I understand that many of our friends throughout the world are concerned by reports of villages being burnt and of hordes of refugees fleeing. As I said earlier, there have been no conflicts since5September and no clearance operations. We too are concerned. We want to find out what the real problems are. There have been allegations and counter-allegations and we have to listen to all of them. And we have to make sure that these allegations are based on solid evidence before we take action.
Action will be taken against all peoples, regardless of their religion, race, or political position who go against the laws of the land and who violate human rights as accepted by our international community. We have never been soft on human rights in this country. Our government has emerged asabody committed to the defence of human rights. Not of any particular community’s rights, but of the rights of all human beings, within the borders of our country.
As we concentrate on problems in the Rakhine Sate, I would also like to take this opportunity to remind you that there are problems as serious for us as what is happening in the west of our country. We have been trying to build peace out of internal strife. A peace that must be lasting and that must be accompanied by sustainable and equitable development. We would like to invite you to take part in this peace process. To join us in finding lasting solutions to the problems that have plagued our country for years.
The peace process that we started last year in August is continuing and we are having many difficulties. I am not surprised by this because it is the way of peace processes anywhere in the world, that they come across difficulties and sometimes the processes stall and sometimes they come toadead halt and sometimes it seems as though everything is falling apart, and yet, in the end, we all gather together and move forward. Because all of us basically want peace rather than war. We want harmony rather than conflict. This is the aspiration shared by all our peoples: peace, stability, harmony and progress. It is notalarge agenda, but it isadifficult one.
And as we go forward in our efforts to redress the ills of this nation, I would like to ask our friends who understand and sympathise with, both our aspirations and our problems, to join us. We would like you to join us inapositive and constructive way to find new paths towards peace and stability and towards harmony.
We would like you to think of our country asawhole. Not just as little afflicted areas. It is asawhole only that we can make progress. I would like to use the analogy ofahealthy human being. A healthy human being has to be healthy all over. You cannot neglect his general health just to concentrate on one particular ill. I use this analogy because our [health] sector is one that has made the greatest progress since we came into the administration last year. By concentrating on public health, we have found that other health problems can also be better addressed. For example, within one year, deaths from HIV were halved – not because we are concentrating just on HIV/AIDS, but because we were concentrating on public health asawhole, the health of all of our peoples and all our communities. This is how I would like you to look at our country.
We areayoung and fragile democracy facing many problems, but we have to cope with them all at the same time, in the way that we have to cope with all of our health problems at the same time. We cannot just concentrate onafew. I would like to invite you to join us in finding new ways, new answers, more constructive, more positive, more innovative, and possibly more daring.
If we cannot resolve our problems quickly, it does not mean that we are never going to be able to resolve them. It just means that the suffering of our peoples is extended. We would like to bring an end to the suffering of our peoples as quickly as possible. We would like to make our countryanation, within whose borders, everybody can live in security and prosperity. This isalarge order. This isabig ambition. But it is not one impossible to fulfil. We all have to join together.
I accept that the real responsibility lies with us, the people of this country. All the people of Myanmar, from the government, to each and every single individual within this country has the responsibility for the development and progress of this country. But, we would like our friends to join us in our great endeavour. This is certainlyabig endeavour. An ambitious endeavour. A determination to build out ofacountry, beset by many problems,aState that is healthy, that is strong, that can look forward toasecure future.
It is sad that in meeting our diplomatic community, I am obliged to focus on justavery few of our problems, when there are so many which I think we could resolve together. That is why I am opening the door to all of you who wish to join us in our endeavours. We invite you to join us, to talk to us, to discuss with us, to go with us to the troubled areas, where we can guarantee security for you, because we don’t want the added problems of anything happening to any of you, so we would like you to join us, then to see for yourself what is happening and think for yourself, what can we do to remove these problems? And also, I want you to take special care to study the peaceful areas – how have they managed to keep the peace? How have they managed to preserve harmony? Why are they not at each other’s throats in these particular areas? These are the answers that we need. It is not justamatter of removing ills, but also of promoting what is positive. We have to remove the negative and increase the positive, and we would like to do that together with all of you.
As you will probably be aware, our Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement is leading our humanitarian assistance programme. We are very happy that the International Committee of the Red Cross is joining us in this and we would welcome others who would like to aid us in our endeavours. Many have already committed to help us by donating generously – in cash as well as in kind. We will make sure that everything that is given towards the promotion of peace and harmony in the Rakhine is used in the best possible way to benefit all communities.
We don’t want Myanmar to beanation divided by religious beliefs, or ethnicity or political ideology. We all have the right to our diverse identities and we all have the right to strive to fulfil our lives in the ways in which we believe are right. But we also have to work together because we belong to one nation. And as we belong to one nation, we also belong to this world.
It is for this reason that we place great importance on the role of the United Nations as an assembly of nations which was created to promote peace and harmony, to ensure that our world should not ever again, in future, fall into the suffering that we all experienced during the Second World War. It was with the intention of putting an end to wars – that is to say – putting an end to conflicts, that the United Nations was established, and I would like to think that what we are doing here today, may be the beginning ofatruly strong and effective movement to bring an end to all the conflicts within Myanmar. The conflicts between our communities, between our peoples, and also the conflict of ideas with regards to how we are to go forwards. Conflicts of ideas can be sorted out, can be removed through discussion and dialogue and through open-minded and the generosity and courage, that enables us to see other people’s point of view. I would also like to say that the generosity and courage that would enable other people to see our point of view as well.
It is by cooperating only, that our world can go forward. By attacking each other, either with words, or with weapons, or even with emotions, will not help us. Hate and fear are the main scourges of our world. All conflict arises either out of hate or fear. It is only by removing the sources of hate and fear that we shall be able to remove conflict from our country and from our world.
As you know, there are many allegations and counter-allegations. I have not gone into any of them because it is not my purpose to promote and encourage conflict, whether of ideas, or of arms, but to try to promote harmony and understanding. I hope that you will understand us and join us in our endeavours.
As I said earlier, this isadiplomatic briefing. This was intended to keep the members of our diplomatic community and the representatives of our friends from all over the world, in touch with what we are trying to do. But in some ways, it is more than justadiplomatic briefing. It isafriendly appeal to all those who wish Myanmar well. A friendly appeal to help us to achieve the ends that I think, you would agree are desirable, not just for this particular country, but for countries all over the world.
Myanmar State Counsellor Office added 10 new photos.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်ငံတော် အစိုးရမှဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သံတမန်များအား အသိပေးပြောကြားချက်
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၉
ယမန်နှစ်က ရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးခါစ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တုန်းကကျွန်မတို့အစိုးရအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်စာချုပ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အခြေခံမူတွေအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ထပ်လောင်း အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံများအနေနဲ့ ပိုမိုငြိမ်းချမ်းပြီး ကြွယ်ဝတဲ့ ကမ္ဘာ၊ လူသားများအားလုံးအတွက် ပိုမိုကြင်နာ မေတ္တာထားသောနေရာ တစ်နေရာအဖြစ် ဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်နေတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့၊ ယင်းစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းချက်များကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို မျှဝေလိုပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ ကျွန်မအနေနဲ အထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ဖို့ နယူးယောက်မြို့ကို သွားရောက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ယခုလိုသံတမန်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ချိန်မှာ ကျွန်မတို့ကို တာဝန်သုံးရပ် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အပ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေး၊ ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စိန်ခေါ်မှု သုံးရပ်စလုံးဟာ လွယ်ကူတဲ့ တာဝန်တွေမဟုတ်သလို ရိုးရှင်းတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့အတွက် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုတာဟာ ရာစုနှစ် တစ်ဝက်လောက် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေ ဒီမိုကရေစီကိုကူးပြောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ဖွံဖြိုးခါစ ရင့်ကျက်ဖို့ လိုသေးတဲ့ မပြည့်စုံသေးတဲ့ အနေအထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတဲ့အချိန် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ကစပြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့၊ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းအောင် ကြိုးစားနေရတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဟာ အခု ပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးမှ ရရှိအောင်မြင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ် ဆိုမှသာ ကျွန်မတို့ပြည်သူအားလုံး တန်းတူညီမျှ ရရှိခံစားနိုင်မယ့်၊ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး သိရှိထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ရှုပ်ထွေးနက်နက်မှုတွေနဲ့အတူဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျွန်မတို့အစိုးရအနေနဲ့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ချက်ချင်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ထားမှုတွေကလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ သတိပြုစေချင်တာက ဒီကနေ့ ကျွန်မတို့အစိုးရရဲ့ သက်တမ်းဟာ ဆယ့်ရှစ်လတောင် မပြည့်တတ်သေးဘူး ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဆယ့်ရှစ်လ ကာလဟာလည်း ဒီလကုန်တော့မှ ပြည့်မြောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အများမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေအားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ ဆယ့်ရှစ်လဆိုတဲ့ အချိန်ကာလဟာ အလွန် တိုတောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောတာဟာ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အပ်နှင်းထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို ကျွန်မအနေနဲ့ ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေ၊ ကျွန်မတို့အပေါ်မှာကရုဏာတရား ထားရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဒီကနေ့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘာတွေ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတာကို မျှဝေအသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက အလေးထား အာရုံစိုက်နေကြတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မအနေနဲ့ ကောင်းစွာသိရှိ နားလည်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အထွေထွေညီလာခံမှာ ကျွန်မ ပြောကြားခဲ့သလိုပါပဲ ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် နိုင်ငံတွေကြားမှာ တာဝန်သိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကို တုန်လှုပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့အပြင် ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်းအားလုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မယ့် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ကို ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ့် ကျွန်မတို့ အစီအစဉ်တွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ ယမန်နှစ်က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကို သွားရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ကျွန်မ မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ဆယ့်ရှစ်ရက်အကြာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကင်းစခန်း ၃ ခုကို မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင်တွေက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့နဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွေမှာလည်း နောက်ထပ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ လူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြရတယ်။ ကျေးရွာတွေ မီးလောင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့လူတွေ ထွက်ပြေး စွန့်ခွါကြရပါတယ်။ မွတ်စလင် အတော် များများဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ အဲ့ဒီဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်း တည်ငြိမ်မှုတွေ ပြန်လည် တည်ဆာက်နိုင်အောင်၊ မွတ်စလင်နဲ့ ရခိုင် အသိုက်အဝန်းနှစ်ခုအကြား သဟဇာတဖြစ်မှု မြှင့်တင် နိုင်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေ မဖြစ်ပွားခင် အချိန်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီတစ်ရပ်ကို ကျွန်မတို့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ နှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာ ရှည်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မယ့် ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဦးဆောင်ပေးဖို့ ဒေါက်တာကိုဖီအာနန်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြားမှာပဲ ပဋိပက္ခတွေ ထပ်ကျော့ ဖြစ်ပေါ်လာတာကို ကျွန်မတို့ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံးပါပဲ၊ ကျွန်မတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ရေး မြှင့်တင်မှုတွေ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။
လပေါင်းများစွာ အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းနေတယ်လို့ ထင်ရပြီးတဲ့နောက် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ရဲစခန်းပေါင်း ၃၀နဲ့ တောင်ဘဇာကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ တပ်ရင်း ဌာနချုပ်ကို လက်နက်ကိုင်တွေက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ARSA နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၆)၊ ပုဒ်မခွဲ (င) အရ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကို လျော့ပါးစေဖို့၊ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ကို ရှောင်လွှဲဖို့ ကြိုးစားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြမ်းဖက်တွေ အားလုံးကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ရှုတ်ချပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ ပြန်လည်တည်ငြိမ်ဖို့၊ တရားဥပဒေပြန်လည်စိုးမိုးဖို့ သန္နိဌာန်ချမှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်မတို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မဖြစ်စေဖို့၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ထိခိုက်မှု မရှိစေဖို့၊ စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျင့်ဝတ်တွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ တရားဉပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေအားလုံးကို တရားဉပဒေအရ တိတိကျကျ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပဋိပက္ခကြားထဲမှာ ရောက်ရှိနေပြီး ထိခိုက်ခံစားနေရသူ အားလုံးအတွက် ကျွန်မတို့ အထူးပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွါတိမ်းရှောင်နေရသူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်နဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတင်မက သူတို့တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးက လုံးဝ မသိရှိကြသေးတဲ့ မြို၊ သက်၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီးတွေလို လူမျိုးစုငယ်လေးတွေ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဟာလည်း နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွါ တိမ်းရှောင် နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၂၇ ရက်နေ့ကစပြီး လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီ ပေးအပ်မှု အသေးစိတ်ကို ကျွန်မတို့ သံတမန်တွေ သိရှိအောင် ထုတ်ပြန် အသိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို သြဂုတ်လ၂၄ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာဘဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်သွားဖို့ သန္နိဌာန်ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ အချိန်တိုတိုအတွင်း တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အကြံ ပြုချက်တွေကို ဦးစားပေးအကောင်အထည်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ အချိန်ယူဖို့လိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သဟဇာတဖြစ်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးရေးအတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမယ့် အကြံပြုချက်မှန်သမျှကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ အခြေအနေတွေကို ပုံမှန်အနေအထားပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မွတ်စလင် အများအပြားဟာ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရ ပါတယ်။ဘာကြောင့် ဒီလို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေး နေကြတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေကို သူတို့ ဘာကြောင့် ထွက်ပြေးကြသလဲ ဆိုတာ မေးကြည့်ချင်သလို နေရပ်ကို မစွန့်ခွာဘဲ ကျန်ရစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဆက်နေကြတာလဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းချင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ မွတ်စလင်အများစုဟာ တစ်ဖက်ကိုထွက်မပြေးဘဲ ကျန်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လူတွေသိပ်မသိကြပါဘူး။ မွတ်စလင်ကျေးရွာတွေရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ဟာ ဘယ်မှ မပြေးဘဲ ရှိနေကြပါသေး တယ်။ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုး နေရစ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ သိချင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ဟာ ကျွန်မတို့ ဆက်ပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ တစ်နေရာတည်းကို မကြည့်ဘဲ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဘဲ ရှိနေကြတဲ့နေရာတွေကိုလည်း ကြည့်မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ ဘာဖြစ်လို့ ပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင် ရှောင်ရှား နိုင်ကြရတာလဲ။ ဒါ့ကြောင့် သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အသိုက်အဝန်းတွေနဲ့ သင့်မြတ်စွာ ပေါင်းစည်း နေထိုင်နိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို ကျွန်မတို့နဲ့အတူ လေ့လာကြည့်ဖို့ ကျွန်မအနေနဲ့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ကို အသိပေးပါ။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဲဒီဒေသတွေကို သွားရောက်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီလူတွေကို ကိုယ်တိုင် မျက်မြင် တွေ့ဆုံပြီး အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖရိုဖရဲ ကစဉ့်ကလျား ထွက်ပြေနေကြ ချိန်မှာ သူတို့တွေက ဘာကြောင့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေထိုင်နိုင်သလဲဆိုတာကို မေးမြန်းကြည့်ကြ စေလိုပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေ လျော့ပါး သက်သာအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လူမှု-စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေကိုလည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေထဲကမှ အနည်းငယ်ကိုထုတ်နှုတ်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုစီးပွားရေး ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေး(၂၀၁၇-၂၀၂၁) စီမံကိန်းကို ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက-အစိုးရ မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကတစ်ဆင့် ဒေသခံပြည်သူအတွက် ရာနဲ့ချီတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် တစ်ခု ဖန်တီးဖော်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်မှုတွေ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအဆောက်အုံဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးဘက်မှာ ဆိုရင်လည်း လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေဖို့ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကလှေနဲ့ပဲ သွားရောက်နိုင်တဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသတွေဆီ ကူးလူးဆက်သွယ်သွားရောက်နိုင်မယ့် အမြန်လမ်းမကြီး အပါအဝင် လမ်းအသစ်တွေ၊ တံတားအသစ်တွေ တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးအတွက် ဘယ်လိုဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုမှ မရှိစေဘဲပညာသင်ယူခွင့်နဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် ကုသခွင့်တွေ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် သွားလာရ ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုလည်း ရွေ့လျားဆေးခန်း (mobile clinic) တွေ တည်ထောင်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၃၀၀ ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း၊ နည်းပညာသင်တန်းတို့ကိုလည်း စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်ကျောင်းသား တွေကို မည်သည့်ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုမျှမရှိဘဲ အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားမှု မတိုင်ခင် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်က အဆိုပါဒေသရှိ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးထံသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများလည်း ပဋိပက္ခရာဖြစ်ပွားရာနေရာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသမှာ နေထိုင်နေသူ အားလုံးကို စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်လျက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများပေးအပ်ရေး ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေကို ယနေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ပြည်သူများအားလုံးကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများကို ထပ်မံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ နေရပ်ဒေသ စွန့်ခွာသူများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အိမ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း အပါအဝင် အခြားလိုအပ်တဲ့ အကူအညီများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက် စခန်း ၃ ခု ကို ပိတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ ဆောင်ရွက်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားစိစစ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် ချမှတ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အသိုက်အဝန်းအားလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ မွတ်စလင် အသိုက်အဝန်းရဲ့ အကြီးအကဲတွေက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်း ပြောကြားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ သူတို့ကို ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်လာအောင် တိုက်တွန်း ပြောကြားစေလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်လာခြင်းဖြင့် သူတို့မှာ ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမှ မရှိလို့ပါပဲ။ ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့တွေမှ တစ်ဆင့် လူ့အသိုက်အဝန်းတွေအကြား သဟဇာတရှိရှိ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပြည်သူ့ရေးရာနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုတို့ကို ပိုမို နားလည်စေမယ့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုလည်း စတင် သင်ကြားပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ FM Radio လိုင်း တစ်ခုထားပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ မြန်မာ၊ ရခိုင်နဲ့ ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားတွေနဲ့ ထုတ်လွှင့်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် သင်တန်းတွေကို EU, UN တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မီဒီယာများဟာ အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ သွားရောက် သတင်းယူမှုများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အရင်က သွားခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါ သွားခိုင်းနေပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း မီဒီယာအဖွဲ့တွေကို အဲဒီဒေသတွေကို သွားလာခွင့်ပြုထားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အစိုးရအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့မှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလနဲ့ ဇူလိုင်လတို့မှာ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဘက်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအနေနဲ့ မိမိတို့ဆီကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ရှိသော်လည်း သူ့ဘက်မှာ အခြားကိစ္စတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် ခရီးစဉ်ကို ခေတ္တရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အချိန်မရွေး လာရောက်နိုင်အောင် မိမိတို့က စီစဉ်ထားပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အနေနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မြန်မာဘက်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည် လက်ခံဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားထားတာ ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တစ်ကယ် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (Verification Process) ကို အချိန်မရွေး စတင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက် တွေကို မူတည်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ထူထောင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာချင်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံဖို့ ကျွန်မတို့ အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က သဘောတူညီထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြားထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဆိုပါ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်လို့ ဆန်းစစ်အတည်ပြုနိုင်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ပြန်လည်လက်ခံဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။ လုံခြုံရေး နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက် အပံ့တွေ လက်ခံရရှိနိုင်ရေးအတွက်လည်း အာမခံပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ အိမ်တွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု နဲ့ ဒုက္ခသည်များ အလုံးအရင်းနဲ့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မပြောခဲ့သလို စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေ မရှိတော့ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့အနေနဲ့လည်း တကယ်တမ်း ပြဿနာ အရင်းအမြစ်ကို သိချင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စွပ်စွဲမှုတွေ နဲ့ တန်ပြန်စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ အရေးယူမှုတွေ မပြုလုပ်ခင် အဲဒီ စွပ်စွဲမှုတွေမှာ ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ ရာထူးစတာတွေကို ငဲ့ညာမှာမဟုတ်ဘဲ ဒီမြေရဲ့ ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်သူများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများကို အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တုန်းကမှ သက်ညှာမှုမရှိခဲ့ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့အစိုးရဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရေးအတွက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အသိုက်အဝန်း တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ လူများအားလုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို အာရုံစိုက်ဖြေရှင်းနေသလို ကျွန်မတို့အတွက် နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြဿနာလိုဘဲ အရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သာတူညီမျှ တပြေးညီ အကျိုး ဖြစ်ထွန်း စေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အကျိုးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေဖို့အတွက် ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲတချို့လဲ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ မအံ့သြပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တွေ့နေကြ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ ရပ်တန့်နေတာ၊ ရှေ့တိုးမရ နောက်ဆုတ်မရ ဖြစ်နေတာ ၊ တခါတရံမှာ အားလုံးတစစီပြိုကွဲ ပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အနေနဲ့တော့ အားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီး ရှေ့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ စစ်ကိုမုန်းတီးနေပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်ကြပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ ပဋိပက္ခတွေ မလိုလားဘူး။ သဟဇာတရှိရှိနေထိုင်သွားဖို့ကို လိုလားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံး လိုလားတဲ့ မျှော်မှန်းတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုရှိရေး၊ သဟဇာတရှိရှိနေထိုင်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတာဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အာဂျင်ဒါ မဟုတ်ပေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကျွန်မတို့နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပါလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ သဟဇာတရှိမှုကို ရရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေရာမှာ ပါဝင်ဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်၊ နေရာဒေသတစ်ခုတည်းကို ကွက်ပြီး စဉ်းစားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ဆောင်ရွက်မှသာ တိုးတက်မှုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တင်စားလိုပါတယ်၊ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ နေရာတစ်ခုတည်းကို ကုစားဖို့အတွက် အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို လစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူး။
ကျန်းမာရေးကို တင်စားရတာကတော့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဟာ ကျွန်မတို့ အစိုးရတာဝန်ယူပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ယနေ့အထိ အထူးအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လို့ပါပဲ၊ လူထုကျန်းမာရေးကို အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ် ဆိုတာကို သိလာရပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်းမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကြောင့် သေဆုံးနှုန်းကို တစ်ဝက်လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီလိုလျော့ချနိုင်တာဟာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါတစ်ခုတည်းကို အာရုံစိုက် ကုစားလို့အဟုတ်ဘဲ လူထုကျန်းမာရေးတစ်ခုလုံးကို ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဥပမာလိုပါပဲ၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားကို ခြုံငုံစဉ်းစားစေလိုပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ဟာ နုနယ်ပြီး ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အခက်အခဲများစွာကိုလည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာဖို့အတွက် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်သလိုဘဲ ပြဿနာ တစ်ချို့သာမက အဲဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပိုပြီးတော့ ဆန်းသစ်တဲ့၊ ပိုမိုရဲရင့်တဲ့ နည်းလမ်းသစ်တွေ၊ အဖြေတွေကို ရှာဖွေရာမှာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် မဖြေရှင်းနိုင်သေးရင် အဲဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်တော့မှ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားနေရတာတွေ ပိုပြီးကြာရှည်နေတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေခံစားရတာတွေကို အမြန်ဆုံး ကျော်လွန်သွားဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံအတွင်း၊ နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေအားလုံး လုံခြုံအေးချမ်း သာယာဝပြောစွာ နေနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်ဟာ ကြီးမားတဲ့ မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တော့ဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့အားလုံးလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အစိုးရအပါအဝင် ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ဒီတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျွန်မတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုမှာ ပါဝင်ကူညီဖို့ ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။ ပြဿနာတွေရှိတဲ့ကြားထဲက အဲဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ကျန်းမာတဲ့၊ သန်မာတဲ့၊ ရှေ့အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းချက်များနဲ့အညီ လုံခြုံတဲ့ အနာဂတ်ဆီကို လျောက်လှမ်းနိုင်မယ့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တည်ဆောက်သွားတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ကြား လိုပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ သံတမန်အသိုင်းအဝန်းနဲ့ အခုလို တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ကိစ္စတစ်ခုလောက်သာ မီးမောင်းထိုးပြရတာကို အားမရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုတာက ကျွန်မတို့ကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါ၊ ဆွေးနွေးပါ ၊ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ထဲက နေရာကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာကို လိုက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင် ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါ။ ပြီးတော့ ဒီပြဿနာများကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အဲဒီနေရာမှာ တိုက်တွန်းလိုတာက ဒီလို ပြဿနာရှိနေတဲ့ ဒေသမှာ တောင် အချို့လူတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့ တဉီး ရန်လို မှုမရှိဘဲ သဟဇာတ နေနိုင်ကြတယ်။ ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလို နေနိုင်သလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ပါ၊ အဲဒီလိုလော့လာ သုံးသပ်မှုကနေ ကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့ အဖြေကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ မကောင်းတဲ့အခြေအနေကို ဖယ်ရှားလိုက်တာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အပြုသဘော ဆောင်တဲ့အနေအထားတွေကို မြှင့်တင်ပေးရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပျက်သဘောကို ဖယ်ရှားပြီး အပြုသဘောကို မြှင့်တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလိုပါတယ်။
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးအနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့ပေးမှု အစီအစဉ်ကို ခေါင်းဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ အခြားပါဝင်လိုသူတွေ ကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
ငွေအား၊ လူအလား၊ ပစ္စည်းအား နဲ့ ပါဝင်လှုဒါန်းမှုတွေ အများကြီးရရှိနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဲဒီ လှုဒါန်းမှုကူညီမှုများအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ အသိုက်အဝန်းအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျိုးအရှိဆုံး အသုံးချသွားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုတွေကြောင့် အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မဖြစ်စေလိုပါဘူး၊ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မတူကွဲပြားမှုများကို အခြေပြုတဲ့ အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့် ၊ ဘဝကို မိမိယုံကြည်မှုနံ လျောက်လှမ်းခွင့် ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ဟာ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှ နေထိုင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ သက်ဆိုင်ရင် ဒီကမ္ဘာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ဘဲ ကျွန်မတို့ဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို နိုင်ငံများ စုဝေးရာအဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံပြီး ငြိမ်းချမ်းမှု နဲ့ သဟဇာတရှိမှုကို မြှင့်တင်နိုင်အောင် တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ခံစားခဲ့ရမှုမျိုးတွေ ထပ်မံ မဖြစ်ပေါ်လာအောင်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုလသမဂ္ဂကို တည်ထောင်မှုဟာ စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက် တည်ထောင် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့ ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုဟာ ထိရောက်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ရဲ့ အစလို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအားလုံး အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် လို့မြင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အသိုက်အဝန်းများအကြား၊ ပြည်သူများအကြား၊ ရှေ့ကိုဘယ်လို ဆက်လျောက်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် အမြင်အယူအဆ မတူညီမှုများအကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမြင်အယူအဆ မတူညီမှုများအကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခကတော့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ မေတ္တာထားရှိခြင်းနဲ့ ရဲရင့်မှုဟာ အခြားသူတို့ရဲ့ စိတ်ထားကို မြင်တွေ့နိုင်သလို ယင်းကို အခြေခံ၍ အခြားသူများကလည်း မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ထားကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
စကားလုံးတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ လက်နက်တွေနဲ့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အကူအညီလဲပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ မုန်းတီးမှုနဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြဿနာများရဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေဟာ မုန်းတီးမှုနဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုများကနေ ပေါက်ဖွားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်းတီးမှုနဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ စစ်ပွဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကို အဆုံးသတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကရော ကမ္ဘာပေါ်ကရော ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း လတ်တလောအခြေအနေမှာ စွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ တန်ပြန် စွပ်စွဲမှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်၊ ကျွန်မအနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုမှ လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မယုံကြည်တာက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုနဲ့ သဟဇာတရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် ဖြစ်လို့ ပါပဲ။
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ နားလည်နိုင်မယ်၊ ကျွန်မတို့နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်မပြောခဲ့သလို ယခုအခမ်းအနားဟာ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းကို ကျွန်မတို့ ဘာတွေ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို သိရှိအောင်ပြောကြားဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ကျတော့ သံတမန်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုထက် ပိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စေတနာထားတဲ့သူတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလားတူ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လိုအပ်မယ်ဆိုတာကို အားလုံးက သဘောတူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
A North Korean hydrogen bomb test in Pacific Ocean could bring ‘terrifying’ fallout, expert says
‘No one has tested above ground for decades,’ said David Albright, president of the Institute for Science and International Security
PUBLISHED : Saturday, 23 September, 2017, 6:44am
A hydrogen bomb test in the Pacific Ocean that North Korean leader Kim Jong-un promised would be the strongest “hard-line countermeasure” ever launched against the US could bring horrible radioactive effects, aggressive responses and lead to war, nuclear experts warned.
By Devlin Barrett September 24 at 10:16 PM
The Trump administration announced new restrictions Sunday on visitors from eight countries — an expansion of the preexisting travel ban that has spurred fierce legal debates over security, immigration and discrimination.
The new rules vary per country, barring entry into the United States of immigrants and non-immigrants from Chad, Libya and Yemen, on business, tourist or business-tourist visas. It bars entry of Iranian citizens, as immigrants or non-immigrants, but provides an exception for Iranian students, provided they receive extra screening. The proclamation bars immigrants and non-immigrants from North Korea and Syria. It bars immigration by citizens of Somalia.
အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးတိုးနှုန်းကို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက ဆွဲချမည်လို့ဆို
Ageing populations will lower GDP growth in Asia, says Christine Lagarde
Studies show that Asia’s population is ageing faster than anywhere else in the world
AFP | PTI | Seoul Last Updated at September 7, 2017 15:26 IST
The chief of the International Monetary Fund today warned that ageing populations in key Asian economies will drag on their growth, urging policymakers to step up their response to shifting demographics.
Sri Lanka calls monks who attacked Rohingya ‘animals’
COLOMBO: The Sri Lankan government on Wednesday (Sep 27) slammedagroup of radical Buddhist monks who attacked Rohingya refugees on the island as “animals”, pledging action against police who failed to protect them.
Read more at http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/sri-lanka-calls-monks-who-attacked-rohingya–animals–9256224